WARBIXIN: Wasiiro katirsan Somaliland oo kusugan gudaha Puntland, Maxayse tahay Ujeedadoodu? – Puntlandtimes
BADHAN(P-TIMES)- Wafdi ka socda Somaliland, oo uu hogaaminayo Wasiirka Cadaaladda iyo Arrimaha Diinta ee maamulka Somaliland ayaa kusugan degmada Badhan ee gobalka Sanaag, halkaas oo ay kulamo kula leeyihiin bulshada iyo Odayaasha dhaqanka oo ay kala hadlayaan arrimaha khuseeya dhanka maamulka ay ka socdaan ee Somaliland.
Sidaas oo kale, magaalada Badhan waxaa kusugan wafdi ka socda dhanka Puntland oo uu hogaaminayo Wasiirka Waxbarashada ayna ka mid yihiin Wasiir kuxigeenada Arrimaha gudaha iyo Warfaafinta oo dhankooda kulamo la leh bulshada deegaanka.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in ay Somaliland dadaal badan galinayso sidii magaalada Badhan ay uga dhisi lahayd maamul xoog leh oo dhankeeda taabacsan, taas oo ilaa hadda dadku siyaabo kala duwan uga hadlayaan, mana jiraa wax war ah oo ka soo baxay Wafdiga Puntland ee kusugan magaalada Badhan.
Wasiirka Waxbarashada ee Puntland ayaa halkaas u tagay sidii uu u kormeeri lahaa Imtixaanka Shahaadiga ah ee kasocda gobaladaas, balse si kedis ah ayay ku noqotay safarka wafdiga Somaliland, sidda ay sheegayaan xogaha soo gaaraya dhanka Warsidaha Puntland.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhawaan kulamo uu la yeeshay Isimadda gobalka Sanaag mid kamid ah, waxyaabaha ay isku afgarteen waxaa kamid ahaa in Mashaariic horumarineed laga hirgaliyo magaalada Badhan, sidaas oo kalena maamul xoog leh loo dhiso, taas oo ay hadda muuqato taabagalinteeda.
Damaca Somaliland ee kuwajahan magaalada Badhan oo ahayd meesha gacanteeda sida buuxda uga maqan ayaa ka dhigan in ay hadda xooga saarayso sidii ay qorshaheeda u taabagalin lahayd, halka Puntland ay ka wado Mashaariic horumarineed.
Puntland ayaa wadadii ugu dheereyd oo ah Mashruuc isku tashi ah ka wada gobalka Sanaag, sidaas oo kalena waxay xooga saaraysaa in laga dhiso Dhismaha 2aad ee ay leeyihiin mudanayaasha baarlamaanka Puntland, kaas oo hadda dhismihiisu uu socdo.
Madaxweynaha Somaliland, ayaa dhawaan cidiamadii ugu badnaa geeyey deegaanka Yube ee gobalkaas, si ay u hor istaagaan dhismaha wadada laamiga ah ee ay Puntland kasoo bilowday Ceel-Daahir, doonaysana in ay gaarsiiso deegaanka Hadaaftimo.
Labada dhinac ee Puntland & Somaliland, ayaa mudo dheer ku muransan deegaanada gobalada Sool, Sanaag & Cayn, waxaana shalay Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi uu sheegay in ay nabad diyaar u yihiin oo ay ogol yihiin in meesha laga saaro colaadda u dhaxaysa labada dhinac, taas oo u muuqatay mid muujinaysa warar cusub.
Badhani ma laba sal u dhexeeyaa
Dadka reer Sanaag waxaa kala qaybin xun oo aan weligeed soo marin ku keentay doorashadii dhowayd ee barlamaanka Puntland ka dib markii xukuumadii C/weli Gaas si xun u faragelisay.
Deni waxaa moodaa inuu federalka ku mashquulay arimo dib uheshiin oo laga rabay inuu sameeyo Susan fulin waayo dadka badankiisu waa ogyahay tabashooyinka qabaailka.
Binti land.. waaa af ka nool.meelahaa ayay ka mashxaradaa.
Daboole weeye oodoorka kufri weeye iidoorka. Nacalata nacalata iidoorka hargeyso Ka yimi.
Haddii wasiir reer soomaalilaan ah uu tago puntlaan maxaa dambi ka dhigay?Puntlaan waa meel ka mida soomaaliya.soomaalina xuduud ma kala leh oo qofka soomaaliga ahu haddi uusan shido wadin meeshuu rabuu soomaaliya ka aadi karaa.Waxaa puntlaan imaan kara Muuse Biixi iyo Faysal cali Waraabe.Wasiir baad sheegaysaane.Reer soomaalilaan aad u badan baa jooga garoowe oo ay qaar ganacsi ku leeyahiin.Qaar kaloo badana waxay ka qaataan baasa boorka soomaaliya.
Warsangeli land is not and will not going to be play ground for Isaac and Mauretania so if they fighting for power they would meet in there trotory a story been a cowers Mel it out